Rajery : “sarobidy ny fijoroana amin’ny kolontsain’ny tena” | NewsMada
Rajery : “sarobidy ny fijoroana amin’ny kolontsain’ny tena”
Anisan’ireo misongadina indrindra amin’ny karazan-kira “world music”, any ivelany any amin’izao fotoana izao, ireo sanganasan’ny tarika 3MA, ahitana an-dRajery, i Ballaké Sissoko ary i Driss El Maloumi. Na eo aza izany fiarahan’ny kanto sy ny kolontsaina telo samy hafa izany, nambaran-dRajery fa apetrany hatrany ny maha izy azy eo amin’ny fitendrena valiha sy ny mozika malagasy.
Manoloana izany, nohamafisin’ity mpanakanto, fanta-daza eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ity fa sarobidy sy masina ny fijoroana amin’ny kolontsain’ny tena. Anisan’ny lakilen’ny fahombiazana izany, indrindra ho an’ireo manan-talenta, maniry ny hisondrotra amin’ny sehatra ambony kokoa.
Raha tsiahivina, nivoaka tamin’ny 10 novambra teo ny rakikira faharoan’ny 3MA, mitondra ny lohateny hoe “Anarouz”, izay midika koa hoe fanantenana. Niantomboka tany Brezila ny fampisehoana fampahafantarana ity vokatra vaovao ity. Nitohy tany Kanada, New-York, Frantsa, Maraoka izany. Avy eo, nandalo teto amintsika ny tarika, nihazo an’i Bamako.
Fitetezana an’i Eoropa…
Nanomboka tamin’ny fihandohan’ity taona ity, mbola nisesisesy hatrany ny fitetezana firenena samihafa tany Eoropa. “Tamin’ireo toerana rehetra ireo, feno hipoka hatrany ny efitrano nanaovana fampisehoana. Nandeha be ihany koa ny fivarotana ny rakikira”, hoy Rajery.
Etsy ankilan’izay, nitana ny laharana voalohany ny “Anarouz” tamin’ireo fifaninanana “world music”, toy ny “Transglobal world music chart” sy ny “World music chart Europe”. Ankoatra ireo, laharana fahadimy ny hiran’ny 3MA mitondra ny lohateny hoe “Moustique” tamin’ny “playlist” na fandaharan-kiran’ny New-York Times”. Tsy izay ihany, “lasa niainga indray koa ny rakikiranay telo lahy avy, izany hoe, ny ahy manokana amin’ny maha Rajery ahy. Toy izany koa ny azy roa lahy”, hoy hatrany Rajery.
Raha fintinina, ny fitazonana hatrany ny kolontsain’ny tena no fototra niaingan’izany fahombiazana rehetra izany. Marihina fa hiverina hitety firenena samihafa ry 3MA, manomboka amin’ny fiandohan’ny volana marsa hatramin’ny faran’ny taona.